Efa fantatra fa i Kate Middleton dia bevohoka valo volana, ary andrasana amin'ny faran'ny volana Aprily. Raha marina ny valin'ny fitsaboana ary ny endriky ny zaza fahatelo dia i Kate sy William ny 23 aprily, dia hifanandrify amin'ny iray amin'ireo fety kristiana tena manan-danja indrindra, indrindra fa any Grande-Bretagne - Andro fitsaharan'ny St. George, no heverina ho mpiaro ny firenena.
Ity fomban-drazana ity dia mihoatra ny arivo taona. Araka ny voalazan'ny tantara dia i St. George tamin'ny andro fahiny dia mpanafaka ny mponina tao amin'ny tanàna maro avy amin'ny dragona ratsy. Ary taorian 'ny nisehoan' ny olomasina teo anoloan 'ireo mpikomy, dia nitory tamin' ny mpiaro ny tafika anglisy izy tamin 'ny 1098.
Ankehitriny, ho an'ireo olom-pirenen'i Grande-Bretagne, ny andro fankalazana an'i St. George dia tena zava-dehibe toy ny Krismasy.
Maria sa Arthur?
Milaza ny loharanom-baovao fa kely dia kely ny renivohiny, saingy ny fitondrany dia tsy miteraka tahotra ary ankehitriny dia mahatsapa ho tsara izy.
Ireto ny mpanao gazety navoakan'ny mpisitrika:
"Ny daty marina, mazava ho azy, dia tsy fantatra, fa raha teraka ny 23 aprily, dia ho fifandrifian-javatra mahatalanjona, tena tia tanindrazana. Raha teraka ny zaza dia tsy hantsoina hoe George izy. "
Ankehitriny i Catherine sy i William dia nanangana ny zanany lahy George sy ny zanany Charlotte. Ny mpandova fahatelo amin'ireo efatra ireo no fahadimy ho an'ny seza fiandrianana Anglisy, ary ny Prince, dadan'i dadany, dia hamerina amin'ny ambaratonga iray indray. Na izany aza, araka ny fantatra dia tsy mampalahelo azy izany. Na dia tsy fantatra aza ny fampahalalana momba ny firaisana ara-nofo, ary i Catherine sy i William mihitsy aza dia tsy mahafantatra ny maha-lahy na vavy ny zazakely amin'ny hoavy, amin'ny fialam-boly maro samihafa miandry ny zazavavy, ary amin'ny anaran'i Mary.
Iray amin'ireo mpanao baolina any Ladbrokes dia nilaza tamin'ny mpanao gazety fa maro ireo mpanjifa no matoky fa zazavavy iray, ary mahafinaritra ny milaza izany ho fanomezam-boninahitra an'i Bebe Elizabeth II, Maria mpanjakavavy.
Momba ny tahan'ny ho an'ny ho avy ho an'ny anaran'ny lehilahy nefa tsy misy fampahafantarana azo antoka, fa fantatra fa ny fialam-boly no anaran'i Arthur sy Albert, ary eo amin'ireo vehivavy, ankoatra an'i Mary, dia Victoria sy Alice.
Ny mpankafy dia azo antoka: LadyGaga vao haingana no nanao fandidiana plastika
Ny asa mahomby nataon'i Jessica Alba dia niahiahy momba ny vadiny
Ben Affleck dia mihaona amin'ny TV Producer Lindsay Shukus
Gigi Hadid dia lasa zazalahy Backstreet solombavambahoaka
Biographie sy fiainana manokana Catherine Deneuve
Misha Barton sy ilay vahiny tsy fantatra dia nanoroka fety tao Cannes
Nicole Scherzinger sy Lewis Hamilton
Rijana dia reraky ny alahelo!
Fangatahana lamaody - lohataona-lohataona 2015
Ny aretim-pianakaviana sy ny hafanan'ny ankizy - inona no tokony hatao?
Salady kokazo misy paoma
Funchoza amin'ny teny koreanina
Orinasa amin'ny safira
Amin'ny inona no akanjo jiro mainty sy fotsy?
Ahoana ny fomba fitafy fitaka amin'ny vehivavy bevohoka?
Ahoana ny fomba hanaovana labozia?
Macrofen ho an'ny ankizy
Fortress de Wright Hill
Sakafo Summer 2013
Amboaram-baravaran'ny trano fisakafoana
Kanto lohataona mody 2013